REPUBLICADAINIK | म कांग्रेस छाड्ने पक्षमा छुः प्रदीप गिरी - REPUBLICADAINIK
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले पार्टीमा सक्रिय सदस्यता छान्ने प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् ।
एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता गिरीले महाधिवेशनको मुखमा सक्रिय सदस्यता दिइने प्रक्रियाको विरोध गरेका हुन् । उनले सक्रिय सदस्यता महाधिवेशनको मुखमा नभइ पहिलानै दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘महाधिवेशनको मुखमा आफूले बनाएको मतदाताबाट आफै छानिने कस्ते परम्परा हो ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘पहिला आफ्ना मतदाता छान्ने, आफूले छानेका मतदाताबाट आफू छानिने । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पहिला मतदाता छानिन्छ । मतदाताबाट आफू छानिन्छन् ।’
गिरीले नेता कहिल्यै पनि नसुध्रिने बताएका छन् । ‘नेता सुध्रिदैनन् । म पनि सुध्रिदैन । कार्यकर्तामा सुधार गर्नुपर्छ’, गिरीले भने, ‘कस्तो नेतालाई छान्ने ? कस्तो नेतालाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ ।’
‘जनताले भोट दिँदा जसले धेरै पैसा दिन्छ त्यसलाई जिताउने । भीमबहादुर तामाङ, शैलजा आचार्य, कृष्णप्रसाद भट्टराईर्लाइ जनताले हराउँछन् । अनि नेतालाई मात्रै गाली गर्छन् ।’
कार्यकर्ता र जनताले कस्तो नेतालाई जिताएका छन् त्यो कुराले अर्थ राख्ने कांग्रेस नेता गिरीले बताएका छन् । नेता सुध्रिनुभन्दा पनि कार्यकर्ता सुध्रिन आवश्यक रहेको गिरीले बताएका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरूमा सुधार भएन भने पार्टीनै छाड्ने पक्षमा आफू रहेको गिरीले बताएका छन् ।
‘म कांग्रेस छोडने पक्षमा छु । पार्टी छोड्ने पक्षमा पुगेको छ’, गिरीले भने, ‘नेताहरू सधैँ झगडा गरेका छन् । म पदेन सदस्य भएकोले महाधिवेशनमा गएर कसलाई मतदान गर्ने ? यिनै नेतालाई मतदान गर्नुपर्छ । यिनीहरूलाई मतदान गर्नुभन्दा त पार्टी नै छोड्न राम्रो ।’
कांग्रेस नेता गिरीले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठलाई असल अभभिावक बनेर बस्न सुझाव दिएका छन् । नेतृत्वमा जानुभन्दा नेतृत्व दिएर बस्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।
नेता गिरीले नेकपाभित्रको विवाद समाधान भएन भने मुलुकमा विदेशीहरूको चलखेल बढेर जाने बताएका छन् । उनले ओली–दाहालबीच धेरै ठूलो विवाद नरहेको पनि बताएका छन् ।
गिरीले नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति हुनै पर्ने बताए । गिरीले ओली र दाहाललाई मिल्नका लागि नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले दवाव दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
Published : Monday, 2020 November 30, 11:21 am